Omenala na omenaala ndị Myanmar | Akụkọ Njem
Njem Asia | | Myanmar, Asia njem
foto Ebe E Si Nweta: Kee-yuen
La iche iche nke ndị na-eme Myanmar sara mbara nke ukwuu nke na a na-azọrọ na e nwere otu nke 135 mba dị iche iche ndị ka na-eketa nke ha akpaala okwu na olumba.
foto akwụ ụgwọ: mmanụ ụgbọ ala
Okwu ahụ Myanmar pụtara ihe niile mbaHa gụnyere: Bamar, Chin, Kachi, Kayah, Hayin, Mon, Takhine na Shan. Ọtụtụ n'ime ndị ọbịa bụ nke Ndị Bama, nke mejupụtara pasent 69 nke ngụkọta ọnụ ọgụgụ mmadụ nke 47 nde.
Otu n'ime atụmatụ Nke puru iche bu oru nke ndi nwanyị na mba. Ha na-ekere òkè na ndụ -elekọta mmadụ na nke nzukọ na mkpebi na a kpam kpam enweghị enyemaka dabere na nwoke. Womenmụ nwanyị na-aga agba ya na «Tánaka», ihe na-acha odo odo na ọcha.
El ime nke mba ahụ na-egosipụta oke dị iche iche agbụrụ, Na ọnụnọ nke pueblos na-abịa site na mpaghara ugwu. Osimiri Ayeyarwadi na-eme dị ka ndabere nke a n'ókèala.
Site na ya caudal ubi osikapa na ịkụ azụ na-adabere ejiri aka mee, isi ihe nke ihe e ji ebi ndụ maka onu ogugu. Ihe Ayeyarwadi bụ ụzọ ndị burma Ha na-aga n’ụzọ ndịda, na ụzọ nke Jehova Ndi bekee ruo n'obi nke alaeze.
Ndụ okpukpe na-agbagharị gburugburu pagodas ebe ihe akpụrụ akpụ nke Buddha ha na-anabata gị nke a na-apụghị ịgụta ọnụ mmegharị ahụ. Dị ka akụkụ Akwụkwọ Nsọ si kwuo dị nsọ enwere ike imata a Buddha n'etiti 32 na 108 atụmatụ anụ ahụ.
foto akwụ ụgwọ: ebube_euyoque
Anọ bụ postures nke bụ isi (asana): na-eguzo, na-eje ije ma ọ bụ na-anọdụ ala, na-egosi Buddha dị ndụ na-eme a emereme (nkuzi, ngọzi, ntụgharị uche ...), na dina ala, nke na-anọchite anya ọnwụ ya na parinirvana ma ọ bụ nnwere onwe doro anya, ọ bụ ezie na dịka ọnọdụ si dị Buddha dinara ala pụkwara ịpụta tụgharịa.
foto akwụ ụgwọ: fuzzymanue
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Nkechi » Myanmar » Omenala na omenala Myanmar